Crito2| Zizawa's refuge
Posted by zizawa ⋅ 07/10/2010 ⋅ Leaveacomment
Socrates: ‘သူတို့သာ အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင် (လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်) လူအများဟာ (the many) မကောင်းမှုကြီး (greatest evils) တွေကို လုပ်နိုင်သလို ကောင်းမှုကြီး (greatest goods) တွေလည်း လုပ်နိုင်မှာပေါ့။ ဒါဆိုရင် (ကောင်းမှုကြီးတွေလည်း လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်) ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ ခုဟာက သူတို့က နှစ်ခုလုံး မလုပ်နိုင် ဖြစ်နေတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ သူတို့က လူတယောက်ကို ပညာရှိလာအောင်၊ ဒါမှမဟုတ် မိုက်လာအောင် မလုပ်နိုင်ဘူး။ သူတို့ထင်တာ လုပ်နေသလိုဖြစ်နေတယ်။ (ဒီစာပိုဒ်ကို 44dမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီစာပိုဒ်ကို ဘယ်လို interpret လုပ်မလဲဆိုတာ သပ်သပ်ဆွေးနွေးချင်စရာကောင်းတယ်။)
Crito: ‘ဟုတ်ပါပြီလေ၊ ခုပြောတာကိုအသာထားပြီး ကျုပ်ပြောပါရစေ။ ခင်ဗျားထောင်ကနေ ထွက်ပြေးရင် ခင်ဗျားကို ထောင်ကနေ ကျုပ်တို့က ခိုးထုတ်သွားတဲ့အတွက် သတင်းပေး (informers) တွေက ကျုပ်တို့ကို ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်၊ ကျုပ်တို့ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို သိမ်းချင်သိမ်းမယ်၊ နောက်တခြား အပြစ်ဒဏ်တွေလည်း ပေးချင်ပေးမယ်။ ကျုပ်နဲ့ ခင်ဗျား သူငယ်ချင်းတွေ ဒီလို ဒုက္ခရောက်မှာမျိုး ခင်ဗျား စိုးရိမ်နေတယ်မလား။ ဒီမှာ ကျုပ်ပြောမယ်။ ခင်ဗျားမှာ အဲ့သလို စိုးရိမ်စိတ်မျိုးဝင်နေရင် မ၀င်နဲ့၊ ဟုတ်ပလား။ ဘာလို့ဆို ခင်ဗျားကိုကယ်ဖို့ လိုအပ်ရင် ဒိထက်တောင် စွန့်စားရမှာ ကျုပ်တို့ တာဝန်ပဲ obligation ။ ဒီတော့ ကျုပ်ပြောတာကိုယုံစမ်းပါ၊ မငြင်းပါနဲ့။
Socrates: ‘ငါမင်းပြောတဲ့ဟာတွေကို စိုးရိမ်တာပေါ့ Crito ရယ်။ နောက်တခြား စိုးရိမ်တာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။’
Crito: ‘ကဲ ဒါဆို မစိုးရိမ်နဲ့။ ငွေစလေးနည်းနည်းပေးလိုက်တာနဲ့ ခင်ဗျားကို ဒီကနေကယ်ထုတ်ဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ့လူတွေ အများကြီးပဲ။ ဒီသတင်းပေးဆိုတဲ့လူတွေဟာ ဘယ်လောက်ပေါလည်းဆိုတာ ခင်ဗျားလည်းသိတာပဲ။ သူတို့ကို ပိုက်ဆံလည်း အများကြီးပေးဖို့ လိုချင်မှလိုမှာ။ ကျုပ်ပိုက်ဆံကို ခင်ဗျားကြိုက်သလိုသာသုံးပါလေ။ လောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျုပ်အတွက်စိုးရိမ်လို့ ကျုပ်ပိုက်ဆံမသုံးသင့်ဘူး ထင်ရင်လည်း ခုအေသင်ကို အလည်ရောက်နေသူတွေထဲက သူတို့ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး ခင်ဗျားကို ကယ်ထုတ်ပေးချင်သူတွေ ရှိနေတာပဲ။ တယောက်ဆိုရင် ခင်ဗျားကို ကယ်ဖို့သက်သက်ကို ငွေတွေယူလာတာ။ Thebes က Simmias ဆိုတာသိတယ်မလား။ နောက်တခါ Kebes လည်းရှိတယ်။ နောက်တခြားလူတွေလည်း အတော်များများရှိတယ်။ ဒီတော့ ကျုပ်ပြောသလိုပဲ သူများတကာကို အားနာတာနဲ့ပဲ (because you are uneasy about these things) ကိုယ့်အသက်အန္တရယ်က လွတ်အောင် မလုပ်ဘဲ မနေနဲ့။
နောက်တခါ တရားခွင်မှာ ပြည်ပြေးဘ၀နဲ့ ဘာလုပ်ရမလဲ မသိဘူး ဆိုတာမျိုးခင်ဗျား ပြောခဲ့တဲ့မလား။ အဲသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ ထွက်မပြေးဖို့ မစဉ်းစားတာမျိုး မဖြစ်စေနဲ့။ (Don’t let what you said in the court get to you ကိုဆီလျော်အောင်ပြန်သည်။ Triple negative တွေဖြစ်နေတယ်။ ဘာသာပြန်ညံ့လို့ sorry ပါ။) ခင်ဗျားဘယ်နေရာသွားသွား ခင်ဗျားကို ကြိုဆိုမဲ့နေရာတွေ အများကြီးပဲ။ Thessalay ကိုများ ခင်ဗျား သွားချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒိမှာ ခင်ဗျားကို သိပ်အထင်ကြီးလေးစားမဲ့ ကျုပ်မိတ်ဆွေတွေ အများကြီးပဲ။ ခင်ဗျားကို အဲဒိမှာ ဘယ်သူကမှ အနှောက်အယှက် မပေးအောင် ဒီလူတွေက စောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။
နောက်တခါ ပြောရဦးမယ် Socrates။ ခင်ဗျားလုပ်နေပုံက ကိုယ့်ရန်သူက ကိုယ့်ကို ဖျက်ဆီးချေမှုန်းပစ်ချင်နေတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်အသက်လည်း ကိုယ်ကယ်နိုင်ပါလျက်နဲ့ ကိုယ့်ရန်သူတွေ ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ခွင့်ပေးနေတာ ကျုပ်တော့ မှန်တယ်မထင်မိဘူး။
ဒါတင်မကသေးဘူး။ ခုလို အသေခံတဲ့အတွက် ခင်ဗျားသားတွေပေါ်လည်း ခင်ဗျား တာဝန်ကျေမှာမဟုတ်ဖူး။ (you are betraying your sons) ခင်ဗျားကတော့ သူတို့ဘ၀သူတို့ ရင်ဆိုင်နိုင်မယ် တွက်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဖမဲ့သားဆိုရင်တော့ လူတွေက အဖမဲ့သားအဖြစ် ဆက်ဆံကြမှာဘဲ။ ခလေးမွေးပြီးရင် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရမဲ့ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကို ခံနိုင်ရင်ခံ၊ မဟုတ်ရင် ခလေးမယူနဲ့ပေါ့ ဟုတ်လား။ ခုဟာက ခင်ဗျားက အနေအချောင်ဆုံးလမ်း (the laziest path) ကို လိုက်နေတာပဲ။ ခင်ဗျားဘ၀ တလျှောက်လုံးမှာ virtue ဆိုတာကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားသလဲဆိုတာ ခင်ဗျား တချိန်လုံးပြောခဲ့တာပဲ။ ခုအရေးကြုံတဲ့အချိန်မှာ လူကောင်းတွေ၊ သတ္တိရှိတဲ့လူတွေ ရွေးမဲ့လမ်းကို ရွေးရမှာပေါ့။
ပြောရရင်တော့ဗျာ၊ ကျုပ်တို့ဘက်က သတ္တိနည်းလို့ ခုလိုအဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ရတာလို့ သူများတွေက မြင်ကြမှာကို ခင်ဗျားအစား၊ ခင်ဗျားမိတ်ဆွေတွေအစား ကျုပ်ရှက်တယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားကို တရားခွင်တင်ဖို့မလိုပေမဲ့လည်း တရားခွင်တင်ကြတယ်။ နောက်စစ်မေးကြတာတွေကလည်း ပေါက်တတ်ကရတွေ (absurd)ပဲ။ နောက်ဆုံး ခင်ဗျားကို ကယ်လို့ရလျက်နဲ့ မကယ်ဘူး။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျုပ်တို့အကူအညီယူပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်လွတ်အောင် လုပ်လို့ရလျက်နဲ့ မလုပ်ဖူး။ ဒီလိုဟာမျိုးတွေကို ကျုပ်တို့က သတ္တိနည်းလို့၊ မကောင်းလို့ အဖြစ်ခံတယ်လို့ ထင်ကြမှာဘဲ။ ဆိုတော့ ခုအဖြစ်အပျက်ဟာ ကျုပ်တို့ရော ခင်ဗျားအတွက်ပါ ရှက်စရာလည်းကောင်းတယ်၊ မကောင်းမှုကြီးလဲဖြစ်တယ်။ ပြန်စဉ်းစားပါဗျာ။ ပြန်စဉ်းစားဆိုလို့ ခုဟာက စဉ်းစားရမဲ့အချိန် မဟုတ်တော့ဘူးဗျာ။ ဆုံးဖြတ်ရမဲ့အချိန်ရောက်နေပြီ။ ခုလာမဲ့ညမှာ အပြီးဆုံးဖြတ်ရတော့မှာ။ ထပ်အချိန်ဆွဲနေရင် ကျုပ်တို့ဘာမှလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီတော့ Socrates ကျုပ်ပြောတာကို ယုံပါ။ ခင်ဗျားကို ထွက်ပြေးဖို့ တောင်းပန်တာကို မငြင်းပါနဲ့တော့ဗျာ။
Socrates: ‘Crito ရေ၊ မင်းရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုဟာ မှန်ကန်သင့်မြတ်တာ တခုခု (something righteous) တခုခုကို ရှာဖွေတဲ့နေရာမျိုးမှာဆို သိပ်တန်ဖိုးရှိမှာပဲကွာ။ ဒါပေမယ့် မှန်ကန်သင့်မြတ်တာ မဟုတ်လေ၊ ကိုင်တွယ်ရခက်လေပဲ။ ဒီတော့ မင်းပြောသလို လုပ်သင့်မသင့် ဒို့ စဉ်းစားကြတာပေါ့ကွာ။ ဘာလို့ဆို မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ ငါဟာ (ခုပြောမဲ့ စာကြောင်းက တန်ဖိုးရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပါ ထည့်ပေးလိုက်မယ်။) I am the sort of person who is persuaded in my soul by nothing other than the argument which seems best to me upon reflection. (ဒီစာကြောင်းကို ကျွန်တော် ဗမာလိုပြန်ရင် ပျက်မှာမကြည့်ရက်လို့ မပြန်တော့ဘူး။ Socrates ကွ။) ခုလို ကံကြမ္မာဆိုးနဲ့ ကြုံတော့မှ ငါအရင်က ပြောခဲ့တဲ့ arguments တွေကို မစွန့်နိုင်ဘူး။ (စွန့်ရတာမျိုး မဖြစ်ထိုက်ဖူးလို့ ပြောချင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။) နောက်ပြီး ဒီ arguments တွေကို အရင်ကလိုပဲ ငါမြတ်နိုးလက်ခံနေတုန်းပါပဲ။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အဲဒိ arguments တွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ arguments တွေကို ငါမပြောနိုင်ရင်တောင် မင်းခုငါ့ကို ပြောနေတာတွေကို ငါသဘောမတူဘူးဆိုတာကို လက်ခံထားပေတော့။ နောက်ဆုံး ခုအာဏာပိုင်တွေက ငါ့ကို ခလေးလိုသဘောထားပြီး သေဒဏ်၊ ငွေဒဏ်နဲ့ ချိမ်းလားခြောက်လား မလုပ်ရင်တောင် မင်းပြောတာကို ငါသဘောတူမှာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ (ဒီစာပိုဒ်နဲ့ နောက်ပိုင်း Socrates ပြောတဲ့စာပိုဒ်တွေကို ဒီတိုင်းတကြောင်းချင်း ဘာသာပြန်တာနဲ့တင် ပြောချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်မယ်မထင်ဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော့ interpretation ကိုပါထည့်ပြောရင်ကောင်းမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ခုအပေါ်ကစာပိုဒ်မှာ Socrates က သူဟာ အသက်အန္တရယ်နဲ့ကြုံမှ အရင်က သူယုံကြည်ခဲ့တာတွေကို မစွန့်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုတယ်။ ဒီယုံကြည်ခဲ့တာတွေက ဘာလဲဆိုတာမေးစရာရှိတယ်။ နောက်ပိုင်း စာပိုဒ်တွေမှာ သူကဒါတွေကို ရှင်းပြတယ်။ Socrates နေရာကိုဝင်ပြီး ကျွန်တော့စကားနဲ့ ကျွန်တော်ပြောရရင် ‘မောင်ရင် ပြောတာကို ကိုယ်ဘာမှ ပြန်မငြင်းနိုင်ရင်တောင် မောင်ရင်ကိုယ့်ကို ထွက်ပြေးဖို့ ဖျောင်းဖျနေတာ ကိုယ်သဘောမတူနိုင်ပါဘူးကွာ။’ လို့ပြောချင်တာ။ တနည်းအားဖြင့် Socrates ဟာ အေသင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်နာဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာကို ပြောချင်တာပဲ။ ဘာ့ကြောင့် အဲ့သလို ပိုင်းဖြတ်ထားသလဲဆိုတာ နောက်ပိုင်းစာပိုဒ်တွေမှာ တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။)
ဒီတော့ ခုကိစ္စကို ဘယ်လို စစ်ဆေးလေ့လာရင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုအဖြစ်ဆုံး ဖြစ်မလဲ။ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မင်းပြောသလို ကိစ္စတခုချင်းဆီမှာ တချို့ လူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပဲ စဉ်းစားပြီး တချို့ ကိုထည့်မစဉ်းစားတာ မှန်သလား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စကို ငါတော့ ကျေလည်အောင် ဆွေးနွေးမှဖြစ်မယ် Crito။ ငါက သေခါနီးကျမှ ဒီလိုစကားပြောတာလား။ မနက်ဖန် သန်ဘက်ခါ မသေဘူးဆိုရင်လည်း ဒီလိုစကားမျိုးပြောမလားဆိုတာ။ (တနည်းအားဖြင့် Socrates က သူသေရမှာမို့ သူ့ argument ကိုပြောင်းတာမျိုး မလုပ်ဖူးဆိုတာကို ဆိုလိုချင်တာ။ Flesh may be weak, but one shouldn’t makeaprinciple out of that. ဆိုတဲ့ quote တခုကိုကြားဖူတယ်။ ခုသူပြောတာ အဲဒိ quote နဲ့ ဆင်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။) တချို့ လူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပဲ တန်ဖိုးထားသင့်တယ်၊ တချို့ ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို တန်ဖိုးမထားသင့်ဘူးဆိုတာ ဟုတ်သလား Crito။
Socrates: ‘ကောင်းတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပဲ တန်ဖိုးထားသင့်ပြီး တန်ဖိုးမရှိတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုတော့ မထားသင့်ဘူးပေါ့။’
Socrates: ‘ကောင်းတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ဆိုတာ ပညာရှိတွေရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်၊ မကောင်းတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကတော့ ဘာမှမသိသူတွေဆီကလာတာပေါ့။’ (ဒီနေရာမှာ Socrates နဲ့ သဘောမတူပဲ ငြင်းနိုင်စရာလမ်းကြောင်းရှိတယ်။ နောက်ကြုံမှ)
Crito3»